समाचार - तपाइँको तातो प्रेस मेशिन कसरी चयन गर्ने?
तपाईंको तातो प्रेस मेशिन कसरी चयन गर्ने?
तातो प्रेस मेशिन के हो?
तातो प्रेस मेशिन (वा "गर्मी ट्रान्सफर मेसिन") बान्की वा डिजाइनहरू स्थानान्तरण गर्दछ जस्तै टी-शर्ट, माउस प्याड, झण्डा, ह्यान्डब्याग, मग, टोपी, आदि समय, तापमान र दबावको माध्यमबाट। आधारभूत तातो प्रेस मेशिन एक साधारण तापमान नियंत्रण बाकस संग सुसज्जित छ, जबकि अधिक शक्तिशाली ताप प्रेस मेशिन एक डिजिटल नियन्त्रण समारोह छ कि समय, तापमान र दबाव भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ। आधारभूत तातो प्रेस मेशिन प्रकार्य विकल्पहरू बाहेक, केही तातो प्रेस मेशिनहरूले अन्य प्रकार्यहरू पनि प्रदान गर्दछ जस्तै स्वचालित पप-अप, स्वचालित प्रेसिंग, इत्यादि, जुन तपाईंको विशिष्ट अनुप्रयोगलाई राम्रोसँग भेट्न सक्दछ। विचार गर्नको लागि अर्को कारक भनेको के समय वा जनशक्ति बचत गर्न वायमेटिक स्वचालित उष्णता स्थानान्तरण मेसिन वा चुम्बकीय अर्ध स्वचालित तापक्रम स्थानान्तरण मेशिन प्रयोग गर्ने कि नगर्ने। तपाईंलाई थाहा छ, तातो प्रेस मेशिन छनौट गर्दा त्यहाँ धेरै निर्णयहरू हुन्छन्, र हाम्रो लक्ष्य यस विस्तृत प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन हो!
कस्तो प्रकारको ताप ट्रान्सफर मेसिनले मेरो आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ?
प्रत्यक्ष दबाव तातो प्रेस मेशिन
बजारमा सब भन्दा साधारण भनेको सीधा दवाव तातो स्थानान्तरण मेसिन हो, जुन नौसिखाहरूका लागि काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ।
तातो प्रेस मेशिन स्विंग
स्वि away टाईट गर्मी ट्रान्सफर मेसिनको साथ, तपाईं बाक्लो आइटमहरू छाप्न सक्नुहुन्छ, र माथिल्लो भाग आइटमहरूको प्लेसमेन्टको समयमा जलाउनबाट रोक्नको लागि स्विंग गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि तपाईं उत्पादनको गति बढाउन सक्नुहुनेछ, फोहोर घटाउन सक्नुहुन्छ, र छिटो, सुरक्षित र थप सही राखिएको छ।
कथा किन छनौट गर्नुहोस्?
Yiwu टेल मशीनरी र स्पेयर पार्ट्स Facoy उच्च बनाने की क्रिया मशीनहरु र स्पेयर पार्ट्स को एक सुसज्जित परीक्षण सुविधा र कडा टेक्निकल बल संग एक निर्माता हो। एक विस्तृत श्रृंखला, राम्रो गुण, उचित मूल्य र स्टाइलिश डिजाइनको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू धेरै उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो मुख्य उत्पादनहरूमा टी-शर्ट तातो स्थानान्तरण मेशिन, -1-१ डिजिटल डिग्रेसन मुद्रण मेशिन, -1-१ डिजिटल डिजिटल तातो स्थानान्तरण मेशिन, -1-१० डिजिटल तातो ट्रान्सफर मेशिन, मग प्रिन्टि machine मेसिन, र सम्बन्धित लेपित मग, उच्च बनावट मग, र changing परिवर्तन मग, संगीत मग, फ्ल्यास मग र मसी कागज। सबै उत्पादनहरू व्यापक रूपले मान्यता प्राप्त र प्रयोगकर्ताहरू द्वारा विश्वास गरिएको छ र निरन्तर परिवर्तन हुने आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। स्वागतम OEM, हामी नमूना मेसिनको प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छौं र सानो अर्डर पनि स्वीकार्य छ। हामी भविष्यका व्यापार सम्बन्ध र आपसी सफलताको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न जीवनका सबै क्षेत्रका नयाँ र पुराना ग्राहकहरूलाई स्वागत गर्दछौं!